Sida loo abuuro a Trailer qurux badan Movie ee '11 iMovie
Dhamaan inaad ogaato oo ku saabsan iMovie: Talooyin, Tutorial, lagu bedelan karo oo More
Wuxuu daboolaa qayb kasta oo iMovie: talooyin, umeerin, kale, dhib iyo ka badan. Haddii aad tahay qof user Windows ah oo doonaya in ay sameeyaan filimada guriga kula wanaagsan software video tafatirka, waxaan sidoo kale ku talineynaa dhan-in-mid iMovie barnaamijyada PC.
iMovie isjiidka: Sida loo abuuro Movie isjiidka iMovie
iMovie yimaado la feature cusub ee isjiidka movie oo kuu saamaxayaa inaad sameyso Hollywood sida videos guriga fudayd. Dad badan ayaa aaminsan in la abuuro isjiidka movie ee iMovie waa ay adag tahay. Dhab ahaantii, waa ay fududahay in la abuuro trailer movie ee iMovie ah. Si fudud u dooro mid ka mid ah 15 arrimo filim, buuxi dulmar ah iyo dooran clips video for storyboard ah. Raac talaabooyinka si ay u abuuraan kuu gaar ah trailer movie ee iMovie.
Tallaabada 1. In la abuuro mashruuc cusub oo dooran template trailer ah
Tag File> New Project inuu ku soo bilowdo mashruuc cusub. In Dulucda Mashruuca suuqa kala, doortaan mawduuc movie trailer. Waxaad ku eegaan karo theme ee xaq u adigoo double-riix. Halkan waxa aad ka astaysto magaca trailer mashruuca, dhigay heerka muuqa iyo jir ah mawduuca movie trailer.
A kooban info ee template movie trailer iyo sida ridday kuwa badan oo ka tirsan waxaa qoreysa muuqan hoos ku daawadayaasha, kaas oo kaa caawin kara inaad go'aansato movie trailer template si ay u isticmaalaan.
Goobaha ka dib, ku dhacay "Abuur" si ay u bilaabaan si ay u abuuraan trailer movie ee iMovie ah.
Tallaabada 2. movie Buuxi dulmar trailer in iMovie
Buuxi warbixinta, sida magaca filim, taariikhda, iwm ku dulmar tab iMovie ah. Just riix magaca hadda jira ama erayada iyo nooca qoraalka cusub ku darto macluumaadka. Fadlan hubi meelaha banaan ma hadhay sameeyo. Waa in aad ku buuxisid wararka oo dhan, maxaa yeelay, iMovie lagu daro wixii aad ku qor duurka galay trailer ah.
Tallaabada 3. Jiid video clips in storyboard ah
Riix Storyboard ay ku darto oo aad video iyo qoraalka. Jiid jeedi video clips ka browser Event eee placeholders si uu u sameeyo movie trailer ah ee iMovie. Waxaad ka bedeli kartaa qoraalka placeholder la adiga kuu gaar ah sida aad jeceshahay. Just waxa guji iyo nooca aad qoraal u gaar ah waxa ay in ka badan.
Talo : Haddii aad mar hore laga keeno filimada galay iMovie, aad dooran kartaa Library Event ah. Haddii aadan ku daray in videos iMovie weli, u tag File> Import> Import Movies inay ku shuban filimada in iMovie. Laakiin waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah qaabab video ma taageersana by iMovie tan iyo iMovie kaliya taageeraan MP4 qaar ka mid ah, MOV iyo file M4V, oo waxaad u baahan tahay oo ah Mac Video Converter si loogu badalo videos in ay iMovie taageeray videos hore.
Tallaabada 4. U samee liis mudista
Hadda, u tag tab Xabad List ah. Jiid video clips aad rabto in lagu daro aad movie trailer in placeholder ah. iMovie si toos ah in xajmiga saxda dhigay doonaa clips si aad u haboon in trailer ah.
Tallaabada 5. Watch iyo wadaagno movie trailer
Guji mid ka mid ah badhamada play ee geeska kore ee midigta ah browser Project ah. Falanqeynta screen Full sidoo kale waa la heli karaa.
Marka aad ku qanacsan tahay movie trailer, aad wax soo saarka waa karaa ama share in YouTube, MobileMe, vimeo, Facebook, CNN, iwm si toos ah ula dad badan oo dunida ku wadaagaan wanaagsan videos. Ama badbaadin mashruuca si aad Mac u arkaysid ee qalabka la qaadi karo aad.
Sida loo isticmaalo garaaci-dhug in iMovie
> Resource > iMovie > Sida loo abuuro Movie isjiidka iMovie